U-Edson Glauber-iSt.Joseph uya kunceda-ukubala ukuya eBukumkanini
Ukumkanikazi weRosary kunye noxolo ukuze	Edson Glauber nge-28 kaJuni, 2020:
Bantwana bam, mna uMama wenu ndivela ezulwini ukuze aninike uthando lwam kunye nentsikelelo yam yoomama, ukuze nibe noxolo olunzulu kwaye nibe ngabakaThixo, niphila intando yakhe kaThixo kulo mhlaba.
Thandazani, nithandaze, ukuba nibuqonde ngakumbi ubukho bam phakathi kwenu, ngakumbi. UThixo uyanithanda kwaye ndiyanithanda, bantwana bam, ke ndizele ukuthuthuzela kunye nokukukhuthaza kwindlela yokomoya. Isibindi, ukholo kunye nothando. NgeRosari ezandleni zakho uya kuzoyisa ezona zilingo zinzima kunye nezaqhwithi ezifuna ukukuhlisa kwaye zikude kude noThixo. Ngengubo yam ndakukhusela; kwaye phantsi kwayo uyakuhamba ngokukhuselekileyo ujonge kwiNgcwele eNgcwele yo Nyana wam uYesu.
Namhlanje ndikunika intsikelelo ekhethekileyo, kubo bonke abagulayo kwiintsapho zakho. Yiba nokholo, yiba nokholo, yiba nokholo. Ndinisikelele nonke: egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen!
Xa wayesitsho ukuba sizakuhamba ngokukhuselekileyo saya kwiNtliziyo eNgcwele yoNyana wakhe uYesu, iNkosi yethu yavela, inesingqala, inxibe ingubo emhlophe nengubo ebomvu, isibonisa Intliziyo yakhe eNgcwele. INkosi yethu yavula iingalo zayo ngokungathi zisamkela. Ngokujonga kwakhe ndiqonde ukuba ebethetha nathi: Yiza kum! Yiza entliziyweni yam!
Umyalezo kaGloud St Joseph nge-24 kaJuni, 2020:
Namhlanje, uJoseph oNgcwele weza noMntwana osesandleni, ephelekwa nguYohane oBhaptizi kunye noMninimeli Oyingcwele uGabriel.
Uxolo entliziyweni yakho, nyana wam othandekayo!
Nyana wam, ndivela ezulwini ukuze ndikunike kunye nolwehlabathi liphela uthando lweentsholongwane, Intliziyo le yayimthanda kangaka uYesu kunye noMama wakhe ongoyiyo kweli lizwe. Intliziyo yam iyanithanda nonke kwaye ifuna usindiso kwiintsapho zenu. Eli lixesha apho iisakramente ezingcwele zilwelwa kwaye zihlanjelwe ngabaninzi ngenxa yeempazamo, isenzo sesono kunye nokuswela ukholo. Ukucaphuka kwenziwe ngokuchasene nazo zonke iisakramente ezisixhenxe kule minyaka idlulileyo, kubangele usizi olukhulu kunye nentlungu kwiNhliziyo yoNyana wam uYesu. Abaninzi abasakholelwa kubhaptizo olungcwele, kodwa bathi zonke iinkolo zikhokelela kuThixo kwaye ziyamkholisa. Namhlanje, abo bahlala kwimanyano yesibini bazisiwe eCaweni kwaye uninzi lwabo luye lwavunyelwa ukuba lufumane elona Ngcwele lingcwele neGazi loNyana wam oyiNgcwele. Akuzange ngaphambili ububingeleli bunyathelwe kwaye budelwe ngenxa yokuswela ukholo nokubanda kwabaphathiswa abaninzi bakaThixo abathi, ngenxa yokuthanda umhlaba, amandla kunye nemali, bawele nzulu emhadini wesono, bengathembekanga. kubizo lwabo nakuthumo lobuthixo.
Unyana wam uYesu kwi-Ekaristi uyaliwe kwabo bafuna ukumamkela ngesidima nangobungcwele, benesidima esifanelekileyo. Uninzi luye lwavinjwa ubabalo lokukwazi ukufumana isakramente yokuqinisekisa, yokuvuma izono, kwaye uninzi lwabantwana bam basweleka bengavunyelwanga.
Amaxesha anxaxhileyo, nyana wam: maxesha apho uSathana efuna ukulawula umhlaba ngobumnyama, ukufa kunye nokuphelelwa lithemba. Uninzi luye lwashukunyiswa elukholweni ngenxa yokuba bengazange bathandaze njengoko becelwe lizulu, bengazange kananjalo bazingcwalise kweyona Intliziyo yethu ingcwele, kuba bengasathembi isenzo sikaThixo.
Xelela abantakwenu noodadewenu ukuba beze kweyona ntliziyo yam ingcwele ayithandayo uThixo kunye nawe kakhulu, kwaye baya kuxhamla kwiintsikelelo ezinkulu kunye nokuqaqamba unyana wam uYesu anqwenela ukubapha bonke abo bandinika imbeko kwaye bakhala ngoncedo lwam ngokuzithemba nokholo.
Zingcwaliseni mihla le kwintliziyo yam kwaye ndiza kuza ezulwini ndinamkelele ngothando olukhulu kwaye ndinisondeze kuye, ndininike amandla, isibindi kunye nokukhanya ukuze niphumelele amadabi amabi oza kujongana nawo ninyamezele uthando lwalo Nyana wam uYesu.
Ungoyiki nto. Ngqina kuwo onke amazwi obomi obungenasiphelo bo Nyana wam waphezulu kwaye ubomi bakho buza kuguqulwa kukukhanya kwakhe nothando olukhulu, oluhamba emva kwegusha elahlekileyo elahlekileyo kwaye ishiye umendo wenyaniso. Ndihlala ecaleni kwakho, ecaleni kwabo bonke abathembekileyo bam abazinikeleyo abazibeka phantsi kwengubo yokhuseleko lwam.
Ndiyakusikelela nyana wam, kunye neCawe eNgcwele kunye nabo bonke abantu: egameni loYise, Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen!
Ngexesha lovuko, xa iNgcwele uJoseph yathetha malunga neesakramente ezingcwele ezilwayo zaza zangcoliswa, i-John John the Baptist kunye neengelozi enkulu uGabriel baguqa kwaye bahlanganisa izandla zabo emthandazweni, bethandaza umthandazo kaFatima kunye no-Saint Joseph. Bobathathu bathandaze lo mthandazo izihlandlo ezithathu, benika umntwana lowo ukuba aziphindezelele ngezono zabo kunye naboni babo:
Thixo wam, ndiyakholelwa, ndiyathemba, ndiyathemba kwaye ndiyakuthanda. Ndicela intethelelo yakho kwabo bangakholwayo, abangamkhonziyo, abathembisiyo kubo kwaye abangakuthandi.
Umyalezo weNkosi yethu uYesu Krestu nge-21 kaJuni, 2020:
Nyana wam, abantu abasebenzisa imilomo yabo ukukutshutshisa ngokunyelisa nokunyelisa, kunye nemiyalezo oyifumanayo, bayanditshutshisa, lowo ndikunike esi sipho sikuwe. Isono abasone ngaso siya kuhlala siphambi kwabo, sibamangalela, ukuba abanakuguquka kwaye bangaguquki kwizenzo zabo. Njengoko benditshilo kunyoko ngenye imini, ndinomonde kwaye ndiyakwazi ukulinda, kodwa onke amadoda nabafazi bomhlaba mabangxame, ngoba ixesha liyahamba kwaye kungekudala, ayisayi kuba yinceba yam le baya kuba nayo, kodwa yeyam ubulungisa obuya kuza phakathi kwakho nonke.
Yiba noxolo kunye nentsikelelo yam!
← UMarco Ferrari -Ukuthanda uYesu
UGisella Cardia - Jonga ukuba… →